Warsaxaafadeed: Mawqifka Koonfur Galbeed ee Doorashooyinka iyo Dhaarinta Xildhibaannada | dayniiile.com
Home WARKII Warsaxaafadeed: Mawqifka Koonfur Galbeed ee Doorashooyinka iyo Dhaarinta Xildhibaannada
Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu aad uga xun yahay habdhaqanka Guddiga FEIT, musuqa baahsan ee ka dhex socda iyo kala qeybsanaanta ku timid xubnaha Guddiga.
Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu u arkaa tallaabada uu qaaday Mudane Muuse Geelle Yuusuf ee uu ku bartilmaameedsaday kuraas deegaanno gaar ah laga soo doortay inay tahay mid sharci darro ah oo khilaafsan heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka.
Maadaama Guddiga uu lumiyay waajibaadkii loo igmaday iyo madaxbannaanidii laga sugayay, hoggaanka SEIT oo kaashanaya xubnaha Guddiga Hirgelinta Heer Federaal ee ka hawl galayay Koonfur Galbeed waxay si toos ah ugu wareejinayaan faylasha xildhibaannada Xoghayeyaasha Labada Aqal ee Barlamaanka JFS.
Koonfur Galbeed waxay xoojinaysaa in la dadajiyo dhaarinta iyo guda galka doorashooyinka, waxayna ka digeysaa tallaabooyinka lagu dheereysanayo muddo xileedka kaasoo ay ka shaqeynayaan qaar kamid ah xafiisyadii loo igmaday inay hawshan si hufan usoo gabagabeeyaan.
Previous articlewar kasoobaxay AL shabaab oo lagu sheegay in Bari tahay maalinta koowaad ee Rabadaan
Next articleDEG DEG Caawa iyo Yugreen oo halis kujirta.
MAXAA DHICI KARA HADDII KENYA SHEEGATO LAHAANSHAHA JUBALAND?
During severe rains in Brazil’s Rio de Janeiro state, mudslides killed...
Doorasho Maanta ka dhaceysa Magaalada Jowhar